Vatsvakurudzi vakakonzera makombiyuta evanhu kuti vaone zvakavanzika mawebhusayithi akange akadzivirirwa nehurumende dzinodzvinyirira.
MunaMugore 2014, Sam Burnett naNick Feamster vakatanga Encore, chirongwa chekupa nguva chaiye uye pasi rose zviyero zvekutsvaga Internet. Kuti uite izvi, vatsvakurudzi, avo vaiva paGeorgia Tech, vakakurudzira vadzidzisi vewebhu kuti vaise iyi snippet yekodhi mune mafaira ekutanga emapeji avo ewebhu:
Kana iwe ukaitika kuti unoshanyira peji yewebhu nekodhidhi iyi snippet mauri, web browser yako ichaedza kuonana newebsite iyo vatsvakurudzi vari kutarisa kuti zvigone kutsvaga (semuenzaniso, webusaiti yebvumirwe rezvematongerwe enyika). Zvadaro, web browser yako ichadzoka zvakare kuvatsvakurudzi pamusoro pekunge yakakwanisa kuonana neyo inogona kudzivirirwa yewebhu (Mufananidzo 6.2). Zvakare, zvose izvi zvichave zvisingaonekwi kunze kwekuti iwe uchitarisa HTML source file yewebhu peji. Zvimwe zvisingaonekwi zvepaji peji mapeji zvikaitika chaizvo pawebhu (Narayanan and Zevenbergen 2015) , asi hazviwanzobatanidza kuedza kwakajeka kuedza kuongorora.
Mufananidzo 6.2: Chirongwa chekutsvakurudza kweEncore (Burnett and Feamster 2015) . Iko mavhesi webhusaiti ane kemudhi kadikiti inopindirwa mairi (danho 1). Kombiyuta yako inoshandura peji yewebhu, iyo inokonzera basa rekuyera (danho 2). Kombiyuta yako inoedza kuwana chinangwa chezviyero, iyo inogona kuva webhusaiti yeboka rakarambidzwa mune zvematongerwe enyika (danho rechitatu). Chirevo, chakadai sehurumende, chinogona kudzivisa kukwanisa kwako kune chinangwa chekuyera (danho 4). Pakupedzisira, kombiyuta yako inoburitsa migumisiro yechikumbiro ichi kuvatsvakurudzi (kwete kuratidzwa mumufananidzo). Yakadzorerwa nemvumo kubva kuna Burnett and Feamster (2015) , Burnett and Feamster (2015) 1.
Iyi nzira yekuenzanisa kuongorora kune dzimwe dzimba dzakakosha zvikuru. Kana mawebsite akakwana anosanganisira iyi nhepfenyuro yemadiresi, ipapo Encore inogona kupa nguva chaiyo, pasi-scale scale yeiwe mawebhusayithi ari censored. Vasati vatanga purojekiti, vatsvakurudzi vakataura neRBB yavo, iyo yakaramba kurongedza basa racho nokuti yakanga isiri "vanhu vanoongorora tsvakurudzo" pasi pe Common Rule (mutevedzeri wemitemo inobata tsvakurudzo dzakawanda dzakabhadharwa nehurumende muUnited States; kuti uwane mamwe mashoko, ona zvinyorwa zvezvakaitika kare pakuguma kwechitsauko chino).
Nguva pfupi mushure mekunge Encore yakatangwa, zvisinei, Ben Zevenbergen, iye zvino mudzidzi akapedza kudzidza, akabatana kune vatsvakurudzi kuti vabvunze mibvunzo pamusoro pemitemo yeprojekti. Kunyanya, Zevenbergen ainetseka kuti vanhu mune dzimwe nyika vaigona kuiswa pangozi kana kombiyuta yavo yakaedza kushanyira mamwe mawebhusayithi ane hanya, uye vanhu ava havana kubvuma kupinda muchidzidzo. Kubva pane zvekukurukurirana uku, Team yakawanda yakashandura iyo purojekiti kuedza kuongorora kuvharwa kwee Facebook chete, Twitter, neYouTube nekuda kwekutsvaga kwekutsvaga nzvimbo idzi zvakajairika panguva yekushandurwa kwebhundaneti (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Mushure mekusvitsa deta uchishandura iyi shanduro yakagadzirirwa, pepa rinotsanangura nzira yepamutemo uye zvimwe zviitiko zvakatumirwa ku SIGCOMM, musangano mukuru wekombiyuta yesayenzi. Komiti yepurogiramu yakakoshesa rubatsiro rwehutano hwepa pepa, asi yakaratidza kunetseka pamusoro pekushayikwa kwekubvumirwa kwakagadzirirwa kubva kune vatori vechikamu Pakupedzisira, komiti yepurogiramu yakasarudza kuparadzira pepa racho, asi (Burnett and Feamster 2015) nezvekunyanya kunetseka (Burnett and Feamster 2015) . Chirevo chakadai chisati chave chisati chashandiswa kare paSIGCOMM, uye nyaya iyi yakatungamirira kune mhaurirano yakawedzerwa pakati pemasayendisiti emakombiyuta pamusoro pemaitiro emitemo mukutsvakurudza kwavo (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) .